Wararka Maanta: Isniin, Dec 30, 2019-Ururka Al-shabaab oo goor dhaw sheegtay mas'uuliyada Qaraxii maalin ka hor ka dhacay Ex Kootarool Afgooye
Isniin, December, 30, 2019 (HOL) - Ururka Al-shabaab ayaa maalin kaddib goor dhaw sheegtay in ay ka danbeeyeen Qaraxii 28kii bishan Sabtidii ina dhaafay ka dhacay Ex Koontarool Afgooye.
Qoraal goor dhaw lagu baahiyay Bogga Ururka uu ku leeyahay Twitter-ka ayaa lagu sheegay in bartilmaameedka Qaraxaasi uu ahaa gaadiid ay la socdeen shaqaale Turkish ah iyo Ilaalo la soctay.
Laakiin Qoraalka kama uusan hadlin khasaaraha kale ee soo gaaray dadka rayidka iyo dhmashadii baahsaneyd ee ka dhalatay Qaraxan marka laga soo tago shaqaalaha Turkiga ee ku geeriyooday.
Sidoo kale sheegashada Al-shabaab ayaa imaneysa xili isla maanta War ka soo baxay hay'adda Nabad-sugida Qaranka lagu sheegay in Qaraxaasi qorshihiisa laheyd dowlad shisheeye oo aysan magaceeda sheegin.
12/30/2019 12:56 AM EST
Isniin,December, 30, 2019 (HOL)-Wararka ka imanaya magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa sheegay in ay geeriyootay qof ka mid ah dadkii dhaawacyada ahaa ee shalay laga qaaday magaalada Muqdisho,